‘मर्जरको अनुभवले खारिएका छौँ, २ मा २ जोड्दा २२ हुनेगरी सिनर्जी इफेक्ट ल्याउँछौँ’ | Ratopati
अनुपमा खुञ्जेली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेड
personटुना भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeचैत ६, २०७६ chat_bubble_outline0
डिसेम्बर २०१९ मा चीनको उहानबाट फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)ले विश्व अर्थतन्त्रलाई गहिरो असर पारेको छ । यतिबेला कोभिड–१९ को असरलाई लिएर विश्वले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै विश्व अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ०.४ प्रतिशतको क्षति पुग्ने र यसले एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन् बढी प्रभाव पार्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
कोरोनाको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । पर्यटन, होटल लगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहँदा नेपालका बैङ्किङ क्षेत्रमा भने अहिलेसम्म खासै ठूलो असर देखिएको छैन । बैङ्कहरुले सङ्क्रमण फैलियो भने के गर्ने भनेर सतर्कता भने अपनाएका छन् । विशेष गरेर नोटबाट सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बैङ्कहरुले विशेष सतर्कता अपनाउन थालेका छन् ।
नेपालका २७ वाणिज्य बैङ्कमध्येको एक हो ‘मेगा बैङ्क नेपाल’ । स्थापनाको ९ वर्षे अवधिमै यसले उत्कृष्ट बैङ्कको उपाधि हात पार्न सफल भयो भने सोही बैङ्ककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले उत्कृष्ट महिला व्यवस्थापकको उपाधि हात पारिन् । यतिबेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा केन्द्रित भइरहेका छन् ।
गण्डकी विकास बैङ्कलाई एक्वायर गर्ने अन्तिम तयारीमा रहँदा मेगा बैङ्क अर्को ‘बिग मर्जर’को लागि पनि ढोका खुला गरेर बसेको छ । प्रस्तुत छ, गण्डकी विकास बैङ्कको एक्विजिसनका लागि मेगा बैङ्कको तयारी, ‘बिग मर्जर’को सम्भावना, बैङ्कको समग्र अवस्था र पछिल्लो समय प्राप्त गरेको एकपछि अर्को सफलता र बैङ्किङ क्षेत्रमा कोरोनाभाइरसको प्रभावमा केन्द्रित रही मेगा बैङ्ककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनुपमा खुञ्जेलीसँग रातोपाटीका लागि टुना भट्टले गरेको अन्तर्वार्ता ।
–विश्व बजारमा कोरोनाभाइरसको गम्भीर असर देखिएको छ, नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा यसले कतिको असर पारेको छ ?
कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर जुन खालको त्रासको अवस्था छ, त्यो यहाँ पनि छ । भलै अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौँ । प्रार्थना गरौँ, छिट्टै यो कहरको अन्त्य होस् र भाइरसमुक्त भएर विश्व पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कियोस् ।
चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । त्यहाँ असर पर्दा पूरै विश्वलाई नै असर पर्छ । चीनले विश्वलाई नै कच्चा पदार्थ तथा सरसामान निर्यात गर्दै आएको छ । चीनको अर्थतन्त्रमा असर पर्दा विश्वमा स्वतः पर्ने नै भयो । यसबाट हामी पनि अछुतो हुन सक्ने कुरै भएन । हाम्रो देश अनि हामी पूर्ण रूपमा दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकमा निर्भर छौँ ।
हामीले आशा गरेको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको छ । भ्रमण वर्ष २०२० सार्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्नुपर्यो । पर्यटन क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पिल्लर मानिएको थियो तर अहिले यो क्षेत्रलाई ठूलो मर्का परेको छ । राष्ट्र बैङ्कले पर्यटन क्षेत्रलाई साथ दिनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो । देशले आशा गरेको क्षेत्रमै ठूलो धक्का लाग्यो । अहिले निर्माण कार्य बन्द छ । होटल व्यवसाय, पर्यटनलगायत सबै बन्द हुँदा हामीलाई पनि यसको असर स्वतः परिरहेको छ ।
बैङ्किङ क्षेत्र भनेको अपरिहार्य क्षेत्र हो । त्यसैले हामीले सेवालाई बन्द गर्न सक्दैनौँ । बरु कसरी सुरक्षित तवरले सेवा दिने भनेर हामी सतर्क हुनुपर्छ र विभिन्न सतर्कताको उपाय अपनाएका छौँ । नोटबाट पनि भाइरस सर्ने खतरा भएको कारण हामीले नोट चलाउने कर्मचारीलाई अनिवार्य पन्जा र मास्कको प्रयोग गर्न भनेका छौँ र यो सुविधा उपलब्ध पनि गराएका छौँ ।
यो क्षेत्रमा असर देखिएको खण्डमा राष्ट्र बैङ्कसँग मिलेर के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछौँ । सरकारले हामीलाई जसरी अगाडि बढ्नु भन्छ त्यहीअनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायत सरकारले बैङ्क अफ इङ्ल्यान्डमार्फत् राहत प्याकेज ल्याएर बैङ्किङ क्षेत्रलाई केही राहत दिलायो । अब अन्य देशले पनि यसलाई अनुसरण गर्नु जरुरी छ । व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएसँगै बैङ्किङ क्षेत्र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको छ । नेपालमा पनि समस्या आइहालेमा सरकारले केही राहत प्याकेज ल्याएर यो क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।
–कोरोनाको कहरबाट बच्न तपाईंहरुको चाहिँ तयारी कस्तो छ ?
बैङ्कका सबै शाखा कार्यालय र मुख्य कार्यालय लगायतमा ह्यान्ड स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाएका छौँ । ग्राहक तथा कर्मचारी सबैलाई ह्यान्ड स्यानिटाइजर प्रयोग गरेर मात्र प्रवेश गराएका छौँ । त्यसैगरी कर्मचारीलाई मास्क, पञ्जा अनिवार्य गरेका छौँ । तातो पानी पिउन र आफ्नो स्वास्थ्यबारे सचेत हुन बारम्बार हाम्रा कर्मचारीलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेका छौँ । ज्वरो नाप्ने र ज्वरो देखिएका कर्मचारीलाई बिदामा बस्न दिने हाम्रो योजना छ । त्यसैगरी बायोमेट्रिक प्रणालीबाट कर्मचारीको हाजिरी हुँदै आएकोमा यसलाई तत्कालका लागि बन्द गराएका छौँ ।
साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन जरुरी ठानेर त्यसमा केन्द्रित छौँ । त्यसैगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा आइरहेको छ, बाहिर यो लागू भइरहेको बेला हामीले पनि यस्ता सिस्टमलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । साइबर सुरक्षाका लागि हामीले आईटी टिमसँग विदेशको केपीएमजीसँग सम्झौता गर्न लागेका छौँ ।
–अब बैङ्कको मर्जर र एक्विजिसन प्रक्रियाबारे कुरा गरौँ । गण्डकी विकास बैङ्कको एक्विजिसन प्रक्रिया के हुँदैछ ? यो कहिलेसम्म टुङ्गोमा पुग्छ ?
२०७७ वैशाख २५ गतेसम्ममा हामी एक्विजिसनको काम सक्ने गरी अगाडि बढेका छौँ । अहिले हाम्रो सिस्टम मर्जको काम भइरहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ । हामी वैशाखसम्ममा काम सकेर एकीकृत कारोबार गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
–डीडीए रिपोर्ट कहिलेसम्म तयार हुन्छ ?
छिट्टै तयार हुन्छ । हाम्रो डीडीए रिपोर्ट एकदमै राम्रो छ । यो रिपोर्टअनुसार हामी विशेष साधारण सभा गर्छाैँ । राष्ट्र बैङ्कमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि जान्छौँ ।
–शाखा व्यवस्थापनमा के हुँदैछ ? कतिवटा स्थानान्तरण हुन्छन् ? मर्जपछि शाखाहरुको क्षेत्रीय सन्तुलन कसरी हुन्छ ?
गण्डकी विकास बैङ्कलाई प्राप्तिपछि हाम्रा २०७ वटा शाखा हुन्छन् । ६३ जिल्लामा बैङ्कका शाखाहरु फैलिनेछन् । बैङ्कहरु अहिले सबै स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउन लागि परेका छन् । गाउँपालिकामा शाखाहरु पुगेका छन् । सबै क्षेत्रमा बैङ्किङ सुविधा पुर्याउने हाम्रो पनि चाहना हो ।
शाखा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनेछौँ । नयाँ शाखा थप्नेभन्दा पनि शाखा डिजिटाइजेसनलाई अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । नेपालीको जीवनशैली यति व्यस्त छ कि कसैसँग समय छैन, त्यसैले बसी बसी हात हातबाट बैङ्किङ कारोवार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सुविधा उपलब्ध गराउनमा हामी केन्द्रित छौँ ।
सिस्टम मर्जर भनेको ५० प्रतिशत मात्र काम समाप्त भन्ने बझ्छौँ हामी र बाँकी ५० प्रतिशत भनेको कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हो । गण्डकी विकास बैङ्कका कर्मचारीको योग्यता र क्षमताअनुसारको स्थान दिएर ल्याउन हामी चाहन्छौँ । भोलिका दिनमा मर्जरले २+२=२२ बनाउने खालको सिनर्जी इफेक्ट ल्याउनु छ ।
हामी सबैतिरबाट बलियो बन्नुपर्छ भन्नेमा सचेत छौँ र टेक्नोलोजीलाई अवलम्बन गरेका छौँ । अहिले मोबाइल बैैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ, क्यूआर कोड, अनलाइन बैङ्किङ, पस मेसिन, एटीएम लगायतका सेवा दिइसकेकाले हाम्रा शाखाबाट यी सबै सेवा उपलब्ध हुन्छन् । शाखाहरुलाई यता उता चलाउनेभन्दा पनि सेवा सुविधा विस्तारमा नै हामी केन्द्रित हुन्छौँ ।
–कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? गण्डकी विकास बैङ्कको माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई मेगा बैङ्कमा कसरी समावेश गरिँदैछ ?
हामीले पहिला पनि दुईवटा (पश्चिमाञ्चल र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैङ्क)लाई एक्वायर गरिसकेका छौँ र त्यो सफल पनि भयो । विगतको मर्जरबाट सिकेको अनुभवबाट पनि गण्डकी विकासलाई एक्वायर गरेर अझ राम्रोसँग अगाडि लैजाने हाम्रो योजना छ ।
यतिबेला हामी हरेक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा लागेका छौँ । सिस्टम, क्रेडिट, अपरेसन सबै विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिन थालिसकेका छौँ । ‘लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर’को पनि सुरुवात गरेका छौँ ।
वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कको सिस्टम तथा नियमहरु फरक हुने भएकाले उनीहरुलाई यता अवतरण गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्छ । त्यसैले हामीे उनीहरुलाई वाणिज्य बैङ्कको सबै सिस्टम तथा नियम कानुन सिकाएर ल्याउँछौँ । त्यसैगरी विकास बैङ्कमा भइरहेका राम्रा अभ्यासहरु अनि राम्रा संस्कारलाई पनि हामी आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्छौँ ।
हाम्रो बैङ्क तेस्रो ठूलो क्यापिटल भएको बैङ्क हो । मर्जरपछि दोस्रो ठूलो क्यापिटल भएको बैङ्क बन्छ । एनपीए लेभल १.०५ प्रतिशतमा राखेका छौँ । डिपोजिट र ऋण प्रवाहमा एक सय अर्ब माथि छौँ । साइजको हिसाबले १०औँ स्थानमा छौँ भने नाफाको हिसाबले १३औँ स्थानमा छौँ ।
कर्मचारीको मूल्याङ्कन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भएकाले वार्षिक रूपमा भन्दा पनि प्रत्येक क्वाटर (अर्धवार्षिक) रूपमा कर्मचारीको म्रल्याङ्कन गर्छौं । मूल्याङ्कन मात्रै होइन उनीहरुबाट प्रतिक्रिया लिने र दिने काम पनि गरिरहेका छौँ । यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउन र स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गरेको छ । हामी त कर्मचारीको खुसीलाई नै कम्पनीको सफलता मान्छौँ । सबैको ताकत र श्रमले बैङ्कलाई एउटा दिशा दिन्छ, अनि मात्र बैङ्क सफल हुन्छ ।
गण्डकी विकास आएपछि हामी १०औँ वाणिज्य बैङ्क बन्छौँ । २७औँबाट २४औँ अनि १७औँ हुँदै १०औँ स्थानसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै मिहिनेत गरेका छौँ । अब १०औँ स्थानबाट माथि उक्लिन हामीले जुन मिहिनेत गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी सक्रिय छौँ । हाम्रा कर्मचारीलाई सबल बनाएर अगाडि बढ्छौँ । कसैलाई तलमाथि गर्दैनौँ । कसलाई कहाँ राख्ने र कुन ठाउँका लागि को सही छ, त्यसको सही पहिचान हुन्छ । शाखाको मूल्याङ्कन गर्न पनि सुरु गरेका छौँ । अब कुन ठाउँमा कस्तो म्यानपावर चाहिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै कर्मचारी पठाउँछौँ । अहिले हामी सम्पूर्ण शक्ति, साधन, स्रोत लगाएर ह्युमन रिसोर्सलाई बलियो बनाउनमै लागेका छौँ ।
मर्जरपछि बैङ्कको वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ ? यसले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कसरी सिर्जना गर्न सक्छ ?
ग्राहकका लागि सबै पक्षबाट ढुक्क हुन सक्ने अवस्था बैङ्कले सिर्जना गरेको छ । हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ र सर्भिसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
बैङ्कको क्यापिटल राम्रो छ, चुनौतीको सामना गर्न सक्छ । एनपीए लेभल स्थिर छ, साइज बढाउँदै लगेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ । मर्जर र एक्विजिसनमा अगाडि बढेको छ । ६३ जिल्लामा फैलिएको छ । प्रोडक्ट र सर्भिस उत्कृष्ट छ । डिजिटाइजेसनमा केन्द्रित छ । ग्राहक सेवामा समर्पित छ । विभिन्न योजनाका साथ अगाडि बढेको छ । डिपोजिट सङ्कलन र ऋण प्रवाहमा राम्रो छ । निक्षेपमा उच्च व्याजदर दिएका छौँ । व्यक्तिगत निक्षेपमा ९.७५ प्रतिशत व्याजदर दिएका छौँ । यी लगायत बेस रेट सिङ्गल डिजिटमा ल्याइसकेका छौँ । हामीले क्वार्टरअनुसार आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छौँ । ग्राहकले रिपोर्ट हेरेरै मूल्याङ्कन गरेर मात्रै हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ ।
हामीसँग अहिले ७ लाख ग्राहक छन् भने एक्विजिसनपछिको २ वर्षमा त हाम्रा ग्राहक सङ्ख्या १० लाख पुग्नेछन् । अन्य बैङ्कमा र मेगामा हेर्ने हो भने ग्राहक सेवामा हामी अब्बल छौँ । हरेक शाखामा ग्राहक सेवाका लागि भिन्न अफिसरहरु भेट्न सकिन्छ । बैङ्कमा आउने हाम्रा ग्राहकको अवश्यकता के हो र कस्तो सेवा चाहन्छन् ? सबै काम ग्राहक सेवामा रहेका हाम्रा कर्मचारीले गरिदिन्छन् । ग्राहकलाई कुनै अलमल नै हुँदैन ।
गत तीन वर्षको आकडा हेर्ने हो भने बैङ्किङ बजार १५/१६ प्रतिशतले बढेको छ भने हामी ३०/३२ प्रतिशतले बढेका छौँ । बजारको गतिभन्दा हामी दुई गुणा अगाडि छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले हेर्ने यही नै हो । उनीहरु बैङ्कको वासलातलाई गहन अध्ययन गर्छन् । बैङ्कको विगतदेखि अहिलेसम्मको सम्पूर्ण परिसूचकलाई अध्ययन गरेर यस्तो अवार्डका लागि उपयुक्त बैङ्क छनोट गर्ने हो ।
हामी हाम्रा ग्राहकबाट ‘मेगा बैङ्कभित्र छिर्दा मेरो बैङ्क जस्तो लाग्छ, मलाई आनन्द लाग्छ’ भन्ने सुन्न चाहन्छौँ ।
हामी सेवा गर्न बसेका हौँ । त्यसैले सेवालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले उत्कृष्ट बिमा सुविधा पनि दिएका छौँ । त्यसैगरी उच्च व्याजदरको प्रोडक्ट छ । ऋण प्रवाहको प्रोडक्टमा ‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’को छ । सबै नेपालीलाई मिल्ने प्रोडक्टहरु हामीसँग छन् । रिटेलमा ३५ वर्षसम्मको ऋण सुविधा दिएका छौँ । कतिपय प्रोडक्टमा तीन वर्षसम्म व्याजदर स्थिर रहने व्यवस्था पनि छ । त्यसैगरी डिजिटाइजेसनका प्रोडक्टहरुमाः अनलाइन बैङ्किङ, कार्ड, मोबाइल बैङ्किङ लगायत छन् । बैङ्कले दिनसक्ने जति सबै सेवा उपलब्ध गराएका छौँ । त्यसैले मेगा बैङ्कको सेवा सुविधा लिने ग्राहक खुसी छन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हरेक शाखामा हामीले गुनासो सुनुवाइ डेस्क राखेका छौँ । शाखा प्रबन्धकलाई केही कमी कमजोरी भएमा भनिदिनु हुन म ग्राहकलाई अनुरोध गर्दछु । काम गर्दा त्रुटि हुन्छ । कहीँकतै हामी चुकेका छौँ भने भनिदिनु होला ।
मेगा बैङ्क बलियो हुनुको भन्दा अर्को पक्ष विदेशी ऋण हो । हामीले विदेशबाट ऋण पनि ल्याइसकेका छौँ । दोहा बैङ्कसँग २० मिलियन डलर ऋण ल्याएका छौँ, यो नेपालको बैङ्किङमा अपरिहार्य थियो । विदेशबाट पैसा ल्याउने मेगा नै पहिलो बैङ्क हो ।
–जस्तो ३५ वर्षसम्मको ऋण सुविधा दिएको भन्नु भयो, यसमा कतिको जोखिम छ ?
पहिलो, नेपालीलाई घरका लागि सरकारले पनि प्रोत्साहन गरिरहेको र सहज पनि बनाइदिएको छ । हामी यसमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । किनकि हामीले तीन वर्षको रेटलाई ‘लक इन’ गर्न पनि पाउने र ३५ वर्षसम्मको ऋण लिन पनि पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यसले ग्राहकलाई धेरै फाइदा मिलेको छ । यसमा जोखिम व्यवस्थापन हामी लिन्छौँ । भुक्तानी क्षमता, उमेरको हदबन्दी लगायतमा जोखिम व्यवस्थापन पनि हामी गर्छौं ।
–अबको मर्जर नीति र बिग मर्जरबारे तपाईंको धारणा के छ ? मेगा बैङ्कले अरू बैङ्कलाई मर्ज गर्ने वा अरू बैङ्कसँग मर्जरमा जाने सम्भावना कतिको छ ?
अहिले हामी यो एक्विजिसनलाई टुङ्ग्याउनमै केन्द्रित छौँ । त्यसपछि मर्जरका लागि बजारमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसलाई हेरेर अगाडि बढ्छौँ । अहिले नै हामीले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा केही निर्णय गरेका छैनौँ तर अर्को मर्जरका लागि हामी खुला छौँ । मर्जरमा जाँदा बैङ्क ठूलो हुन्छ । बैङ्क ठूलो भएपछि जोखिम सामना गर्ने क्षमता बढ्छ । राष्ट्र निर्माणका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।
अहिले विकास बैङ्कलाई एक्वायर गर्दा पुँजी र शाखा सञ्जाल ठूलो भए पनि सञ्चालन प्रभावकारिता प्राप्त हुन सकेको छैन । ठूला बैङ्कबीचको मर्जरबाट त्यस्तो दक्षता प्राप्त हुन्छ । त्यसैले ‘बिग मर्जर’ले बैङ्किङ जगतलाई बलियो बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
–बैङ्कको अहिलेको अवस्था र वित्तीय सूचक चाहिँ कस्तो छ ?
एकदम राम्रो छ । अहिलेको ग्रोथ पनि राम्रो छ । सीसीडी रेसियो ७८/७९ मा स्थिर छ । साना तथा मझौला कर्जा र खुद्रा क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भएर ऋण बढाउन अहिले केही कठिन भएको हो कि जस्तो देखिएको छ । तर यसमा पनि विस्तारै सुधार हुन्छ । लेखा परीक्षण, कर लगायतका विषयमा ग्राहकले बुझेर प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा यसमा छिट्टै सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागसँगको साझेदारीमा ४३ जिल्लाबाट हामीले स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ । स्वदेशी र विदेशी निक्षेपमा भइरहेको सुधारले हाम्रा वित्तीय परिसूचक राम्रो बन्दै गएका छन् ।
शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले दूरगामी सोचाइका साथ काम गरेका छौँ । हरेक वर्ष छात्राको सङ्ख्या थप गर्दै जाने भनेका छौँ । यसले पछिसम्मको बाटो बनाएको छ । बैङ्कले नाफा कमाएसँगै यस्ता सामाजिक काममा हात अघि बढाउनुपर्छ । कमाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यो कमाइले समाजलाई के योगदान गरेको छ, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हो । यस्ता पक्षले पनि हामीलाई यो उपाधि दिलाउन सहयोग गर्यो । यसको प्रमुख श्रेय हाम्रा ग्राहकवर्ग र कर्मचारीमा नै जान्छ ।
दोस्रो त्रैमासमा बैङ्किङ क्षेत्रको औसत प्रगति कमजोर भए पनि मेगा बैङ्कको प्रगति राम्रो देखियो, यो कसरी सम्भव भयो ?
हामी उत्पादकत्वमा विश्वास गर्छौं । यो वर्ष हामीले ‘प्रोडक्टिभिटी एभ्री डे’ भन्ने नारा सुरु गरेका छौँ । हाम्रा कर्मचारीलाई आफूले कति योगदान गरँे भनेर आफैँ मूल्याङ्कन गर्न भनेका छौँ । यसले कर्मचारीमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ । ‘टुगेदर वी रिच अ बेटर रिजल्ट’ भन्ने हाम्रो अर्को नारा हो । लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दा गन्तव्यमा पुग्न सजिलो हुने र परिणाम पनि राम्रो आउने भएकाले यसमा हामी केन्द्रित छौँ । जागरुक हुनु, आफूले के गर्नुपर्ने थाहा पाउनु र आफ्नो कामको दैनिक आत्ममूल्याङ्कन गर्ने तीनवटा विधिले हामीलाई राम्रो परिणाम दिएको छ ।
–मेगा बैङ्कले अरू २६ वटा बैङ्कलाई पछि पार्दै ‘बैङ्क अफ दि इयर’को अवार्ड जित्यो । यो सफलता कसरी प्राप्त हुन सक्यो ?
गत तीन वर्षको आकडा हेर्ने हो भने बैङ्किङ बजार १५/१६ प्रतिशतले बढेको छ भने हामी ३०/३२ प्रतिशतले बढेका छौँ । बजारको गतिभन्दा हामी दुई गुणा अगाडि छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले हेर्ने यही नै हो । उनीहरु बैङ्कको वासलातलाई गहन अध्ययन गर्छन् । बैङ्कको विगतदेखि अहिलेसम्मको सम्पूर्ण परिसूचकलाई अध्ययन गरेर यस्तो अवार्डका लागि उपयुक्त बैङ्क छनोट गर्ने हो । हामी सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको दिगो बैङ्किङमा विश्वास गर्छौं । अस्वाभाविक रूपमा व्यापार बढाएर नम्बर वान बन्ने हाम्रो उद्देश्य छैन । यसलाई हेरेर नै हामीले यो उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएका हौँ ।
हामीले छोरीलाई शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएका छौँ । अघिल्लो वर्षबाटै हामीले हरेक शाखाको तर्फबाट एकजना छात्रालाई निःशुल्क पढाउन सुरु गरेका थियौँ । यसलाई यो वर्ष प्रतिशाखा दुई जना बनाएका छौँ । अब २०७ शाखाबाट २÷२ जना छात्रालाई पढाउँछौँ ।
उनीहरुलाई नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्मै पढाउँछौँ । १२ कक्षा पास गरेपछि उक्त छात्रालाई बैङ्कमै ‘आउट सोर्स’ जागिर दिइने छ, जसले गर्दा आफ्नो स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षासमेत हासिल गर्नसक्ने अवस्था बनोस् । स्नातकपछि उक्त छात्राले मेगा बैङ्कमै सेवा गर्न चाहेमा पहिलो प्राथमिकता उसैलाई दिने नीति बनाएका छौँ ।
–‘बेस्ट वुमन म्यानेजर अफ दि इयर’बाट पनि सम्मानित हुनुभयो । एकपछि अर्को सफलताबाट कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?
यसमा पनि मेरो बैङ्कका सम्पूर्ण सदस्यको हात छ । बोर्ड, कर्मचारी, व्यवस्थापन सबैको योगदानको प्रतिफल हो यो । सबैको साथ र सहयोगले मलाई यो सफलता दिलाएको हो । यो उपाधिले हामीलाई थप ऊर्जा दिएको छ । मेगा परिवारले यसलाई हौसलाका रूपमा लिएको छ । आगामी दिनमा यो हौसला र ऊर्जालाई बढाउँदै भविष्यमा बैङ्कलाई उत्कृष्ट बनाउने बाटोमा अघि बढ्नेछौँ ।
त्यसैगरी कर्जामा पनि ग्राहकले आफूलाई उपयुक्त हुने योजना छनोट गर्न सक्नेगरी योजना ल्याएका छौँ । हामी ग्राहकको विजनेस एड्भाइजरीको रूपमा काम गर्न चाहन्छौँ । त्यसका लागि हामीसँग मेगा क्यापिटल पनि छ । यसले सबै काम गरिदिन्छ । मेगा बैङ्कमा गएपछि बैङ्किङ आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने सोचेर आउनुस्, हामी सबै सेवाका लागि तयार छौँ ।
–यति हुँदाहुँदै पनि अहिले बैङ्कको अवस्था औसतभन्दा तल नै छ । व्यवसायको आकार सानो छ । कस्ट अफ फन्ड, बेसरेट र स्प्रेडरेट तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ । निक्षेप र कर्जा विस्तारबीच सन्तुलन देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी सुधार गर्ने ?
यसका लागि तपाईंले बैङ्किङ इतिहासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको ८३ वर्षे बैङ्किङ इतिहास छ । निजी क्षेत्रका बैङ्कले समेत ३५ वर्षको इतिहास बनाइसके । त्यसमा हाम्रो १० वर्षको भयो । गण्डकी विकास बैङ्कसँगको मर्जरपछि हामी बैङ्किङ क्षेत्रमा १०औँ स्थानमा पुग्छौँ । यति छोटो अवधिमा यो सफलता ठूलो हो । हामीले अहिले जुन वृद्धिदर हासिल गरिरहेका छौँ, त्यसले निकट भविष्यमै हामीलाई माथि पु¥याउँछ । अहिले हाम्रो व्यावसायिक आँकडा जति छ, त्यसलाई अझ विस्तार गरेर अघि लैजाने चुनौती हामी माझ छ । त्यसलाई सहज स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ ।
अहिले हाम्रो बेसरेट एकल अङ्कमा झरिसकेको छ । अहिले कस्ट अफ फन्ड घटेर ७ प्रतिशतको नजिक आइसकेको छ, अब यही हाराहारीमै यसलाई कायम गर्छौं । स्प्रेडदरमा राष्ट्र बैङ्कको नीतिमै टेकेर हामी अघि बढ्छौँ ।
–व्यवसाय विस्तारका नयाँ योजना केके छन् ? निक्षेप र कर्जा लगानी विस्तारका लागि निकट भविष्यमा कुनै नयाँ स्किम आउँदै छन् ?
हाम्रो अहिलेको मुख्य योजना भनेको बैङ्कको डिजिटलाइजेसन हो । डिजिटल बैङ्किङमार्फत् ग्राहकलाई हातहातमा सेवा उपलब्ध गराउने हो । तपाईं हाम्रो बैङ्कभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने सुरक्षित र भरपर्दो रूपमा सम्पूर्ण बैङ्किङ सेवा दिने नै प्रमुख उद्देश्य हो ।
हामीले सबै प्रकारका ग्राहकलाई उपयुक्त हुनेगरी विभिन्न प्रोडक्ट ल्याइरहेका छौँ । निक्षेप राख्न चाहनेलाई छोटोदेखि लामो अवधिसम्मको डिपोजिट स्किम ल्याएका छौँ । ३ महिनाको निक्षेप योजनामै ९.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमा बिमा लगायत अन्य बैङ्किङ सुविधाहरु उपलब्ध गराइरहेका छौँ ।
–वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता र लगानीयोग्य पुँजीको अभावको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
२९ वर्षको बैङ्किङ करियरमा बैङ्किङ क्षेत्रमा मैले धेरै उतार चढाव देखेको छु । त्यसैले अहिलेको क्रेडिट क्रन्चको समस्या धेरै ठूलो समस्या होइन । यद्यपि हामीले यसमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । पहिले बैङ्कहरुको सीसीडी अनुपात निकै कसिलो थियो । अहिले यसमा केही सहजता आएको छ । त्यसैले अब कर्जाको माग पनि बढ्नुपर्छ ।
हामीले अहिले विदेशी पैसा पनि भित्र्याएका छौँ । यो आवश्यक पनि थियो । यसले नेपालमा लगानी गर्न थप सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्नका लागि समस्या छैन ।
–बचत निक्षेपमा अहिले ब्याजदर घटाउन सुरु भएको छ । यसको कारण के हो ?
अहिले बैङ्किङ क्षेत्रको औसत ब्याजदर ६.८ प्रतिशत देखिएको छ । यसलाई ६ प्रतिशत झार्ने कुरा भइरहेको छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्नु भनेको लोनको ब्याजदर पनि घट्नु हो । यसले लोनको डिमान्ड बढाउँछ । ऋणको ब्याजलाई अहिले एकल अङ्कमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसो हुन सक्यो भने बजारको ब्याजदरमा स्थिरता आउँछ ।
–अहिले बैङ्कहरुको एएमएल सीएफटी कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? यसले बैङ्किङ क्षेत्रको विस्तारमा कस्तो असर पारेको छ ?
अहिले सबै बैङ्कले गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गरिसकेका छन् । यो अति महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट थियो । यसमा केही समस्या अझै छन्, त्यो निदान हुन केही समय लाग्ला । बैङ्कहरुले एएमएल सीएफटीका लागि ल्याउनुपर्ने सबै सफ्टवेयर ल्याइसकेका छन् र यसका लागि दिनुपर्ने ध्यान पनि दिइरहेकै छन् ।
यो केन्द्रीकृत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यसमा हाम्रो देशको रेटिङ निकै राम्रो पनि छ । यो त हाम्रो दायित्वको कुरा हो । केवाईसी (नो योर कस्टुमर) अत्यन्त आवश्यक छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरिरहेका छौँ । यसलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।
#अनुपमा खुञ्जेली#मेगा बैङ्क#बिग मर्जर#एक्वायर#मर्जर
अब विकास बैङ्कहरू विलय हुन आवश्यक छैन
टिओडी मिटरका आधारमा पैसा तिर्छौँ, नलिएको सेवाको पैसा कसरी तिर्ने ?
‘फाइभ इन वान’ बहुप्रष्ठित सामसुङ कर्ड माइस्ट्रो रेफ्रिजरेटर नेपाली बजारमा
‘निजीकरण गरिएका उद्योग किनेर चलाएर देखाउनुस्’
'सर्वोत्तमको आईपीओमा ऋण गरेर लगानी गर्नेलाई पनि नोक्सान नहुने गरी लाभांश दिन्छौँ'
‘सीजीले व्यावसायिक दौरानमा पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन’